Guddiga Xallinta Khilaafaadka oo hakiyay is doorashadii Guuleed | KEYDMEDIA ENGLISH
Guddiga Xallinta Khilaafaadka oo hakiyay is doorashadii Guuleed
Guddiga Xalinta Khilaafaadka doorashooyinka ayaa hakiyay ku dhawaaqista natiijada rasmiga ah ee kursigii uu shalay boobay Mahadi Guuleed.
MUQDISHO, Soomaaliya - Guddiga Xallinta Khilafasadka Doorashada Dadban (GXKHDD) ayaa hakiyay ku dhawaaqista natiijada rasmiga ah ee kursiga nambarkiisu yahay HOP239, kaas oo shalay uu isku doortay Ra’iisul Wasaare ku xigeynka dalka Mahdi Maxamed Guuleed.
Xildhibaan Xuseen Carab Ciise, oo afartii sano la soo dhaafay ku fadhiyay kursiga, oo ka mid ahaa Musharixiinta u taagan baratanka kursigan, ayaa Guddiga u gudbiyay dacwo la xariirta in Ra’iisul Wasaare ku xigeynku boobay Kursiga HOP239.
“Haddaba Guddiga Xallinta Khilafraadka Doorashada Dadban (GXKHDD) ee 2020/2021 asagoo gudananya waajibaadkiisa shaqo ee loo igmadey wuxuu farayaa Guddiga Hirgalinta Doorashooyinka Heer Federal (GHDHF) in la hakiyo ku dhawaaqista natijada rasmiga ah ee kursi Lamber HOP239 laga bilaabo 02/11/2021, ilaa inta GXKHDD uu go'aan ka gaarayo dacwada laga soo gubdiyay kursigaas”. Ayaa lagu yiri war ka soo baxay GXKHDD.
Mahdi Guuleed, iyo Cabdi Xaashi, oo majaraha u haya doorashooyinka gobollada waqooyi, muddana ay u xirneyd hir-galinta hannaanka doorshada ayaa labaduba qaab boob ah ku qaatay kuraas Baarlamaan, hayeeshee, Guuleed, ayaa u muuqda inuu Xuseen Carab Ciise, kala kulmayo loollan sharciga ku qotoma.
Soomaaliya waxaa ka dhacaya doorasho musuq-maasuq badan, oo aan lagu tartamaynin kuraasta si xor iyo xalaal ah, waxaana tani meesha ka saareysa rajadii shacabka inay helaan dowlad wanaagsan.
Soomaaliya, waxa ay marti galineysaa doorashoyin musuq miiran ah, oo musharax kasta uu wato malxiis uu doonayo inuu ku boobo kursiga, mana jiro sharci muuqda oo hor istaagaya dastuur ku tumashada, ay raalliga ka yihiin xaafiisyada ugu sarreeya dalka.